Minista Intanet - Anyanwụ Mission Philippines
Mba buru ibu na Ụzọ Ụzọ Amamihe dị na Eshia
Site n'inweetiti 7,000 na ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke nde 104, Filipinz bụ mba dị mkpa na ụzọ nrịgoro dị na Asia. Ọtụtụ Filipinos na-arụ ọrụ na China, mba ndị ọzọ Asia, na ọbụna obodo etiti ọwụwa anyanwụ, ebe ha nwere ọkwá dị elu.
Ihe Dị Oké Mkpa na Oge Maka Onye Na-eto Eto
Ụlọ Nzukọ Onyenwe anyị anọwo na Philippines ruo ọtụtụ afọ n'ihi mgbalị ndị gara aga na nke ugbu a. Taa, a na-eme atụmatụ ọgbakọ 800. Ndị Filipino Ndị Kraịst dị njikere ịkwalite ozi ọma nke mba ha ma kpalite oge ọzọ maka uto maka Chọọchị, mana ha nwere mkpa iji merie nsogbu ụfọdụ.
Ọtụtụ chọọchị dị na Philippines nwere ma ọ bụ ndị nkwusa oge ọ bụla maọbụ ọ dịghị ma ọlị. Onye ọkpụkpọ egwu nwere ike inye otu ụka dị iche iche na klas na nkuzi miri emi. Ọzọkwa, ọtụtụ ebe dị na Philippines dị anya ma sie ike iru. E mere onye ọkpụkpọ egwu maka oge na ebe dị otú a.
Na 2014 Sunset malitere otu nnukwu ihe na-eme ka ọtụtụ ndị na-egwu egwu na-eme ka ndị mmadụ nwee ike ịnweta ụwa na Oziọma ahụ. Omume Omume na-aga n'ihu na-agbasa Okwu ahụ na ụwa. The Player Player nwere ihe karịrị 400 awa nke Bible na Ọzụzụ Bible.
Atụmatụ maka Solar Mission Philippines bụ iji kpuchie mba ahụ na Okwu Chineke site n'ikesa ndị 2,000 English solar Player na Philippines site na njedebe nke 2018. A ga-enye ha niile ọgbakọ dị iche iche ná mba ahụ, na-arụ ọrụ dị iche iche nke ozi, na ndị isi chọọchị na ndị na-ezisa ozi ọma bụ ndị ga-akụ ma wusie ike ụka ike ma too ụmụnna.
Mgbalị ọ bụla a na-eme iji nweta ego dị mkpa ga-amalite January 24th ma gafee December 31, 2018. Ọtụtụ puku ọgbakọ na ndị mmadụ n'otu n'otu ga-arịọ ka ha kwadoo mgbalị a.
Site na mmesapụ aka nke onye na-enyeghị aha, onyinye maka Sunset International Bible Institute ga-ejikọta dollar maka dollar. Onyinye a na-enweta na Mission Mission na-eru maka egwuregwu a.
Kpọọ Oku na 800-658-9553 iji nwetakwuo ihe ọmụma gbasara Sunlar Player maka Philippines ma ọ bụ gaa na ebe nrụọrụ weebụ ha http://www.sibi.cc/solar.